शिवरात्रिका दिन काठमाडौंका यी स्थानमा सवारी निषेध - Makalukhabar.com
'मास्क नलगाए पशुपतिको दर्शन गर्न नपाइने'
मकालु खबर	 बुधबार, फागुन २६, २०७७ ०७:४९ मा प्रकाशित
काठमाडौं । ‘महाशिवरात्रिमा पशुपति जाँदै हुनुहुन्छ भने अनिवार्य मास्क लगाउनुहोला । मास्क नलगाए दर्शन गर्न पाइँदैन ।’ पशुपति विकास कोषले कोभिड-१९ को जोखिम कायम रहेकोले दर्शनार्थीले अनिवार्य मास्क लगाउन आग्रह गरेको हो ।
नेपाल प्रहरीको अगुवाइमा सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग समेतबाट सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने उनले जानकारी दिए । नेपाल स्काउटका समेत गरी ४ हजार स्वयमसेवक परिचालन हुने डा. ढकालले जानकारीले दिए । मन्दिर नजिकैको गेटमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुनेछ । उक्त दिन सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको गरेर ३० वटा स्वास्थ्य संस्थाको शिविर हुनेछन् । यी स्थानमा सवारी निषेध !
मेयर्स कप क्रिकेटः पुलिसले अन्तिम खेल खेल्दै